गोनपामा घर बनाउने नक्सा बनाउन पैसा लाग्दैन - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
गोनपामा घर बनाउने नक्सा बनाउन पैसा लाग्दैन
Published On : २८ बैशाख २०७५, शुक्रबार ०८:०७
दरौँदी ः गोरखा नगरपालिका भित्रका भूकम्प पिडित नगरबासीले घर बनाउने नक्सा अब निशूल्कै बनाउन सक्ने भएका छन् । बिहीबार बाट गोरखा नगरपालिकामा घर बनाउन नक्सा बनाउन चाहनेहरुले प्राविधिक सहयोग निशूल्क पाउन थालेका हुन् ।
भारत सरकारको सहयोग प्राप्त यूएनडिपी मार्फत नेपाल आवास पुननिर्माण परियोजना सामाजिक प्राविधिक सहजीकरण अन्तरगत नगरपािलका भित्रकाले घर बनाउने नक्सा बनाउन निशूल्क पाउने भएका हुन् । विहिबार नक्सापासका लागि स्थापना भएको स्डुडियोको गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख राजनराज पन्त र यूएनडिपीका सहायक कन्ट्रीडाइरेक्टर विजय सिंहले संयूक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् । नगर प्रमुख पन्तको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा गोरखाका अध्यक्ष किशोरजंग थापा लगायतले मन्तब्य ब्यक्त गरेका थिए । उक्त कायाएलयबाट भूकम्प पिडितहरुको घरको नक्सा, प्राविधिक सहयोग लगायतको सेवा पाउनेछन् ।